Jawaari Oo Digniin U Jeediyey Xildhibanada Aan Soo Xaadirin Kalfadhiyada Baarlamaanka.
Gudoomiyaha Baarlamanka Soomaaliya Prof. Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari ayaa Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud Waxa Uu ugu baaqey in 18ka bishan uu baarlamanka hor keeno RW-ha Cusub Ee Soomaaliya. Prof. Jawaari ayaa Sidoo Kale sheegey in Madaxweyne Xasan Sheikh looga fadhiyo sidii uu Baarlamanka u horkeeni lahaa RW-ha uu dhawaan...
Wafdi uu hugaaminayo wasiirka gaashaandhiga C/xakiim Xaaji fiqi ayaa gaarey deegaanka no.50 kaas oo beryahan ay isaga soo horjeedeen beelo wada dega gobolka Sh/hose. Deegaanka NO.50 ayaa waxaa degenaa ciidamada dawlada iyadoo ay ka cabanayaan mid kamid ah beelaha ku dagaalamey gobolka sh/hose,waxaana wafdigaani ay u tageen no.50 in ciidamada...
Tukashada salaadda ciidda ciidul adxaa oo si wanaagsan looga tukadey guud ahaan gobolada dalka somalia.
Tukashada salaada ciida ciidul adxaa ayaa guud ahaan gobolada dalka soomaaliya si hagaagsan u dhacdey,gaar ahaan caasimada muqdisho ayaa meelo badan laga tukadey. Masjidka isbaheysiga islaamka ayaa waxaa ku tukadey muslimiin farabadan,iyadoo madaxda qaranka ugu sareeya ay ka qeyb galeen sida m/weynaha jamhuuriyada Xasan Sheekh Maxamuud,isagoo hambalyo iyo bogaadin la...
Nelsan mendalla oo ku geeryoodey magaalada capetown ee dalka south africa.
Hugaamiyihii ugu horeeyey ee south afrikada madaw nelson mandella ayaa lagu soo waramayaa in uu goor dhaw ku geeryoodey guri uu kunoolaan jirey oo ku yaal capetown. Nelsan mandella ayaa in dhawaalaba la xanuunsanaa xanuun kaga dhacey sambabada,kaas oo dhawr jeer qaliin lagu sameeyey,isla markaana ahaa nin da'diisu kor u...
Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi, ayaa xilkii ka qaaday 5 wasiir oo xukuumadiisa ka tirsana, 2 wasiir ku xigeen, wakiilkii Somaliland ee dalka Itoobiya, guddoomiyihii hay'ada shaqalaha iyo guddoomiyihii baanka dhexe, madaxweynaha ayaa sidookale isku badal sameeyay. Wasiirada xilka waayay ayaa kala ah, wasiirkii diinta iyo awqaafta Sheekh Khaliil Cabdillaahi...
Ra’iizalwasaare Saacid oo dhalinyarada soomaaliyeed u balanqaadey in shaqo loo abuurayo.
Ra'iisalwasaare Cabdi Faarax Shirdoon Saacid ayaa kulan la yeeshey dalad ay ku bahoobeen dhawr urur dhalinyaro,kuwaas oo uu sheegey in loo sameyn doono shaqooyin ay ku farxaan ayna xaq ugu leeyihiin xukuumada uu hugaamiyo. Dr saacid oo la arkayey beryahan kulamo iyo kormeero in uu ku tagayo meelo uusan...
Al-Shabaab Oo Sheegatey In 60 Askari Itoobiyaan Ahi Ay Ku Dileen Gobollada Bakool Iyo Hiiraan.
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya dagaallo culus oo maanta ka dhacay deegaanno kala qeybiya gobollada Hiiraan iyo Bakool kuwaasi oo u dhaxeeyay ciidamada muslimiinta iyo kuwa Xabashida Itoobiya. War rasmi ah oo kasoo baxay xarakada Shabaabul Mujaahidiin ayaa lagu sheegay in dagaallo saacado badan qaatay kadib ciidamada Xabashida Itoobiya...
Ciidamada dalka Jabuuti ee ku sugan B/weyne oo sheegey in ay talaabo ka qaadayaan beelo ku dirirex B/weyne dagaalada cidda wadda.
Ciidamada Jabuuti ee B/weyne ku sugan ayaa wacad ku marey in ay la dagaalami doonaan cidii amniga iyo xasiloonida khal khal gelisa,iyagoo ka duulaya dagaalo dhawaanahan ka socdey gobolka hiiraan magaalada B/weyne. Ciidamada dalka Jabuuti oo ay weeraro joogta ah ku hayaan ciidamada xarakada dagaalyahanada Alshabaab ayaan waxba ka qaban...
Madaxweynaha oo ka tacsiyeeyey geeridii Xildhibaan C/casiis Isaaq Mursale
INNAA LILLAAH WA INNAA ILEYHI RAAJICUUN Mogadishu, 22 April 2014- Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamud ayaa tacsi u diray qoyska, eheladda, asxaabta, baarlamaanka iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed geerida ku timid Allaha u naxariistee Marxuum C/casiis Isaaq Mursale oo maanta koox bistooladley ah ay ku toogteen. Madaxweynaha ayaa yiri...